Search results for: Swearing-in
South Africa's new finance minister, Malusi Gigaba looks on after the swearing in of cabinet ministers...
South Africa's new finance minister, Malusi Gigaba looks on after the swearing in of cabinet ministers following a reshuffle that replaced Pravin Gordhan as finance minister with Gigaba along with various other ministers and their deputies in Pretoria, South Africa, March 31,2017. REUTERS/Siphiwe Sibeko
South Africa's president Jacob Zuma gestures during the swearing in of cabinet ministers following a...
South Africa's president Jacob Zuma gestures during the swearing in of cabinet ministers following a reshuffle that replaced Pravin Gordhan as finance minister with Gigaba along with various other ministers and their deputies in Pretoria, South Africa, March 31,2017. REUTERS/Siphiwe Sibeko
South Africa's new deputy finance minister Sfiso Buthelezi speaks during the swearing in of cabinet ministers...
South Africa's new deputy finance minister Buthelezi speaks during the swearing in of cabinet ministers...
South Africa's new finance minister, Malusi Gigaba (2nd R) speaks with members of the treasury during...
South Africa's new finance minister, Malusi Gigaba speaks with members of the treasury during his visit...
South Africa's new finance minister, Malusi Gigaba (2nd R) speaks with members of the treasury during his visit to their offices in Pretoria, South Africa, March 31,2017. REUTERS/Siphiwe Sibeko
South Africa's president Jacob Zuma applauds during the swearing in of cabinet ministers following a...
South Africa's president Jacob Zuma applauds during the swearing in of cabinet ministers following a reshuffle that replaced Pravin Gordhan as finance minister with Gigaba along with various other ministers and their deputies in Pretoria, South Africa, March 31,2017. REUTERS/Siphiwe Sibeko
South Africa's new finance minister, Malusi Gigaba gestures during his visit to the treasury offices...
South Africa's new finance minister, Malusi Gigaba gestures during his visit to the treasury offices in Pretoria, South Africa, March 31,2017. REUTERS/Siphiwe Sibeko
South Africa's president, Jacob Zuma looks on during the swearing in of new cabinet ministers following...